Ururka National Fireworks Association (iyo in kabadan 1200 xubnood) waxay matalayaan danaha soosaarayaasha rashka, kuwa wax soo dajiya, iyo kuwa wax iibiya heer qaran ka hor inta aan la gaarin sharci dejiyeyaasha iyo maamulayaasha Federaalka Waxaan sidoo kale kor u qaadnaa amniga sida lynchpin ee warshadaha. NFA waxay aaminsan tahay adeegsiga sayniska codka ...
Dib ugu celi bulshada
In kasta oo sababtu tahay mid guuleysata, shirkaddu had iyo jeer ma ilaawdo inay dib ugu celiso bulshada. Gudoomiyaha Qin Binwu wuxuu ururiyey in kabadan 6 milyan yuan oo sadaqo sadaqo ah sanadihii lasoo dhaafay. 1. Wuxuu ugu deeqay RMB 1 milyan Ururka Pingxiang Charity Association wuxuuna ugu deeqay RMB 50,000 sanadkasta Magaalada Ch ...
Guddoomiyaha shirkadda-Qin Binwu
Guddoomiyaha shirkadda Qin Binwu wuxuu dhashay Oktoobar 1966, isagoo haysta shahaadada labaad ee jaamacadeed iyo cinwaanka farshaxanka sare iyo farshaxanka farshaxanka. Ku hawlan warshadaha rashka in ka badan 30 sano, oo hadda u adeegaya: Madaxweyne Ku-Xigeenka Shiinaha Fireworks iyo Firecrackers Association, Xubin ka tirsan ...